Windows 8 မှာမြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေသူများအတွက် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Windows 8 မှာမြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေသူများအတွက်
By နေမင်းမောင်9:30 AM6 comments
akalay October 7, 2011 at 11:19 PM
အကိုေ၇...ကျတော် window 8 သုံးတာပါ . ကျတော်လည်း အစတော့ အကိုပြောသလို လုပ်ကြည့်တယ် .. အဆင်မပြေဘူး အကိုရ.. နောက်တော့ ကျတော်သိလိုက်တာလေး .. ပြောပြချင်လို့ပါ .. internet explorer9နဲ့ သူက တည်ဆောက်ထားတာဆိုတော့ မြန်မာဖောင့်က အခက်ခဲဖစ်နေတယ် အကိုရာ .. အဲဒီတော့ tools ထဲကနေ .. internet options ကို သွားလိုက်ပေါ့ .. ပီးရင် .. အဲမှာ font ကို အောက်ဆုံးက ဇော်ဂျီဝမ်း ထားပေးလိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ် .. ညီလေး မှားခဲ့ရင်လည်း .. တောင်းပန်ပါတယ် .. အကို့တွက်လည်း ပြန်လည် မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် .. ကျေးကျေးပါ အကို .. ကျတော့် အကောင့် က zawwinnhtoo@gmail.com . ပါ .. အကယ်လို့များ မှားခဲံရင် ကျတော့်ကို ပြန်လည်သင်ပေးပါ ..ခုတော့ 8 ပဲ ဆက်သုံးဖစ်နေပါတယ် ..
နေမင်းမောင် October 8, 2011 at 12:52 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အခုလိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်က ထွက်ထွက်ခြင်းသုံး ပြီးနောက်ပိုင်းမအားတာနဲ့မစမ်းဖြစ်တော့လို့အကို .. အခုလိုအကိုသိတာလေးမျှဝေပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို ..
ထွန်းလင်း October 18, 2011 at 12:59 AM
အစ်ကိုရေကျွန်တော်ကျတော့vmနဲ့ကောvirtual box နဲ့ပါအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ၊သုံးချင်တာကလဲတော်တော်ဖြစ်နေတော့မထူးဘူးဆိုပြီးပုံမှန်အတိုင်းပါတီးရှင်းအသစ်တစ်ခုလုပ်တင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာကဝင်းဒိုး764bit genuine ပါအဲဒီမှာwin-8x64တင်တာအဆင်မပြေဘူး၊x32နဲ့မှအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာdefault window ကိုwin 8 နဲ့ထားပြီးDual boot လုပ်သုံးတာအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ၊ကိုနေမင်းမောင်ကိုလဲအခုလိုအသိပညာတွေဖြန့်ဝေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
minnyinyi November 3, 2011 at 7:44 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ လိုလေးတွေပြောပြလို့ ကျွှန်တော်ဗမာဖောင့်မရလို့တိုင်ပတ်နေတာ အိုကေသွားပါပြီ အားလုံးကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Chan Chan May 6, 2014 at 2:57 PM
Window 8.1 မှာ Keymagin ကို Install လုပ်ပြီး Run တာ "The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect........" ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ်။ အစ်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
Myanmar Workers Naing January 6, 2015 at 8:21 PM
Window 8.1 မှာ Keymagin ကို Install လုပ်ပြီး Runို.မရဖြစ်နေတာလေး ကူညီပေးပါအုန်း